» तपाईंलाई थाहा छ, जिन्स पाइन्टको खल्तीमा लगाइएको बटनको काम के हो ?
तपाईंलाई थाहा छ, जिन्स पाइन्टको खल्तीमा लगाइएको बटनको काम के हो ?
४ पुष २०७६, शुक्रबार ०६:५४
जिन्स अहिले यति सर्वव्यापी छ कि युवा हुन् या युवती जोसुकै पनि जिन्स पाइन्टमा सजिएको देख्न पाइन्छ । लगाउन सहज, मोर्डन लुक्स र सर्वसुलभ भएकाले पनि युवाहरु यसप्रति आकर्षित छन् । यति लोकप्रिय जिन्स पाइन्टको लुक्स भने दशकौंदेखि परिवर्तन भएको पाइन्न । आजभोली अन्य हरेक कुराहरु केही वर्षमै पूरा नयाँ लुक्समा आउँछन्, जिन्स पाइन्टहरु दशकौंदेखि जस्ताको तस्तै छन् ।
अझ अचम्मको कुरा के भने जिन्स पाइन्टको हरेक खल्तीको माथिल्लो भागमा २-२ वटा बटन लगाइएको हुन्छ । खासमा त्यो बटन कुनै काममा प्रयोगमा आउँदैन । प्रयोग नै नहुने ठाउँमा बटन किन त रु यसको पछाडि निकै ठूलो कथा छ । दशकौं अघि अमेरिकामा जिन्स पाइन्ट लगाउन सुरु गरिएको थियो । त्यहाँको मिल तथा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदूरहरुले जिन्सको पाइन्ट लगाउँथे । यिनीहरुले निकै नै कडा मिहेनत गर्नुपर्थ्यो । सोही कारण मजदूरहरुले लगाएको जिन्स पाइन्टको खल्तीमा सिलाई उध्रिने, फाट्ने जस्ता समस्या निकै धेरै देखिन थाल्यो ।
यो समस्याबाट मजदूरहरु आजित थिए । सो कुराको जानकारी ज्याकोब डेभिसले पाए । त्यसपछि उनले यसबाट मुक्तिको बाटो सोच्न थाले । त्यसैक्रममा उनलाई लाग्यो यदि त्यहाँ कुनै बटन लगाउने हो भने त यसलाई उध्रिनबाट रोक्न सकिन्छ ।
त्यसपछि उनले पाइन्टको गोजीको माथिल्लो भागमा साना-साना बटन लगाउन थाले । जसले निकै बाक्लो कपडा मानिने जिन्सलाई पनि टाइट गर्ने काम गर्‍यो । ज्याकोब जिन्स निर्माता कम्पनी लेभी स्ट्रासका ग्राहक पनि थिए । उनले १८७० मा जिन्समा यसरी बटन लगाउने आइडियाको पेटेन्ट लिन प्रयास गरे । ताकि अरुले यसको नक्कल गर्न नसकोस् ।
तर प्याटेन्ट लिनका लागि भुक्तान गर्नुपर्ने ठूलो धनराशी उनीसँग थिए । त्यसको ३ वर्षपछि उनले लेभी कम्पनीसँग एउटा डिल गरे । २० मे १८७० मा यस कम्पनीले जिन्सको खल्तिको माथिल्लो भागमा बटन राख्ने कुराका लागि प्याटेन्ट अघिकार लियो । जसको परिणामस्‍वरुप अन्य कम्पनीहरुले यस्तो बटन लगाउन नपाउने भए । तर, १९९० मा आएर प्याटेन्ट पब्लिक भयो । त्यसपछि विश्वभरका जिन्स कम्पनीहरुले यस्तो बटन राख्न थाले । जुनकुरा अझै पनि जारी छ । एजेन्सी